Madaxweyne Xasan oo si rasmi ah xilka uga qaaday Agaasimihii Nabad Sugidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu xilka ka qaaday agaasimihii guud ee hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka, Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa dhawaan si kedis ah xilka uga qaaday Sanbaloolshe, kadib markii lagu eedeeyey inuu xiray xildhibaan, sidoo kalana uu si xun ula hadlay qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Sharci ahaanshaha xil ka qaadista golaha wasiirada ayaa la duray waxaana xil ka qaadista ay ku dhawaaqeen loo aqoonsaday soo jeedin xil ka qaadis, waxaana Sanablaloolshe xilka ka qaaday maanta madaxweyne Xasan, kadib markii ay soo jeediyeen Golaha Wasiirada, waa sida uu qabo Dastuurka Soomaaliya.
Wareegto uu xafiiskiisa kasoo saaray maanta madaxweyne Xasan ayuu ku xusay inuu xilkii ka qaaday agaasimihii xilka laga qaaday, isagoo xil ka qaadista u cuskaday qodobbo ka mid ah dastuurka Soomaaliya.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud markii uu arkay qodobada 90-aad iyo 139 aad ee Dartuurka J.F.S, markii arkay xeer Lr yahay 14 ee soo baxay15 Febraayo 1970 kii kuna saabsanaa dhisamaha Hey’ada Sir-doonka & Nabad-Sugid Qaranka, markii uu tixgeliyey go’aankii golaha wasiirada 18/09/2014, markii uu tixgeliyey qodobka 7aad ee sharciga Lr. 1 ee 3-dii Febraayo 1965 kuna saabsanaa nidaamka xukuumadda,
Laga bilaabo maanta oo ay Taariiqdu tahay 20/09/2014 wuxuu Madaxweynaha wuxuu xilka Agaasimaha Hey’ada Sir-doonka & Nabad-Sugid Qaranka ka qaaday Mudane Cabdullaahi Maxamed Cali “Sanbaloolshe” ayaa lagu yiri war kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa 2 maalmood ka hor ka sheegay dalka Britain oo uu booqasho ku joogay in sababaha xilka looga qaaday agaasimihii nabadsugidda ay tahay xarig uu u geystay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamul xumo.
Agaasimihii hore ee xilka laga qaaday ayaa noqonaya mas’uulkii ugu xilliga yaraa ee hayay hay’adda nabadsugidda Qaranka, isagoo xilka looga magacaabay 09-kii July, iyadoo xilkana laga qaaday 07-dii bishan.
Kalfadhiga 5-aad ee baarlamanka Soomaaliya oo maanta furmay